सफ्टवेयरको सिस्टममा ओली सरकारका कम्युनिस्ट मन्त्रीको भविष्य कैद !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
सफ्टवेयरको सिस्टममा ओली सरकारका कम्युनिस्ट मन्त्रीको भविष्य कैद !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बुधबार, अशोज ३, २०७५
काठमाडौं – सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार कति काम गरे भन्नेबारे अनुगमन सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन महाशाखाले मंगलबार अनुगमनका लागि तयार गरिएको सफ्टवेयरमा मन्त्रालयहरूले प्रगति विवरण किन पेस गरेनन् भन्ने शीर्षकमा अनुगमन गरेको हो । अनलाइन मनिटरिङका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सफ्टवेयर बनाएर त्यसमा मन्त्रालयले कार्ययोजनाअनुसार गरेका कामको विवरण अपडेट गर्न भनेको थियो ।
तर, केही मन्त्रालयलाई सफ्टवेयरमा कसरी प्रगति विवरण अपडेट गर्ने भन्ने अन्योल देखिएकाले सहजीकरणका लागि गएको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित अनुगमन महाशाखाका सहसचिव यमलाल भुसालले बताए ।
उनले सरकारको नीति र बजेटका आधारमा मन्त्रालयले पेस गरेको कार्ययोजनाअनुसार कति काम भइरहेको छ भन्ने विषय अब अनलाइनबाटै अनुगमन हुने बताए । त्यसक्रममा विवरण अनलाइनमा अपडेट गर्न केही मन्त्रालयलाई अन्योल देखिएपछि मन्त्रालयमै गएर सिकाइएको उनले बताए ।
अनलाइन अनुगमन प्रणाली भर्खर सुरु भएकाले सबै मन्त्रालयलाई सक्रिय बनाउन केही समय लाग्ने सहसचिव भुसालको भनाइ छ । करिब एक सातापछि अनलाइनबाट मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने प्रणाली सक्रिय हुने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सफ्टवेयर कस्तो छ ?
गत २७ असारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हरेक मन्त्रालयसँग सरकारको नीति तथा योजना र बजेटअनुसार आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको कार्ययोजना माग गरेका थिए । त्यसै आधारमा मन्त्रालयले समय तोकेर पेस गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अनुगमन महाशाखा बनाएको छ ।
महाशाखाले अनलाइन प्रणालीबाटै अनुगमन गर्ने सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ । उक्त सफ्टवेयरमा हरेक मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार भएको कामको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
कार्यशैली ठीक नभएका मन्त्रीलाई हटाउने भनेर उच्चस्तरीय नेतृत्वबाटै अभिव्यक्ति आएपछि हालसम्म मन्त्री परिवर्तनबारे स्पष्ट चित्र सार्वजनिक भइसकेको छैन । केही मन्त्रीका कार्यशैलीले समेत सरकारको आलोचना बढी भइरहेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले गुठीको जग्गामा १५ तले भवन बनाउन भ्याए पछी..
सिन्डिकेटसामु लत्रक्कै झुक्यो ओली सरकार, यातायातको सम्पत्ति फुकुवा !
बिना मगरको मन्त्रालयमा भयंकर टक्कर, अख्तियारसम्म पुग्यो विवाद
लोकसेवाको अनलाइनले नै धोका दिएपछि … अब के गर्ने त ?
कम्युनिस्ट सरकारमा लूट, होटलमा गोष्ठी गर्दै करोडौं बजेट स्वाहा !
त्रिवि सेवा आयोगको अनियमितता, अख्तियारले भेट्यो खतरनाक जालझेल !